inodzidzisa Archives | Save A Train
musha > nezvitima
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi With mazana zvinokwezva enhoroondo uye maonero makuru kuti siyana zuva akatsvoda coastlines kuti cavernous makomo, Europe Zvechokwadi ane zvose. It ndekwaunogumira wakakwana kuti mugwagwa rwendo, sezvo zvichikwanisika kuita nzira yako kubva kune imwe nyika kuenda kune imwe mu…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Nokuti avo ukasazviziva kare, Dema Sango inzvimbo yakakura ine masango kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweGerman. More zvakananga, zvakanyorwa iri rehurumende Baden-Württemberg uye anopindura chikamu chinokosha nayo. Uyezve, nharaunda iri riri pamuganhu France uye Switzerland, saka zvinowanikwa…
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi New zvinotiwira chinangwa chakaisvonaka chevatariri. zvisinei, dzimwe nguva tourist-ushamwari kuona haagoni kuchengeta kenduru kuti kutenga spree, pasinei fadza. Vanhu vanoshanyira nokuda kunotenga kuzviziva, uye kune nerombo rakanaka maguta mazhinji muEurope mavanogona kusunungura…